फेरि ओली क्याम्पमा उठलपुठल भएकै हो त ? अब कता जादैछन पूर्व माओवादीहरु ? « Kalakhabar
फेरि ओली क्याम्पमा उठलपुठल भएकै हो त ? अब कता जादैछन पूर्व माओवादीहरु ?
प्रकाशित मिति : मंगलवार, ४ फाल्गुन २०७७ २०:०१
४,फागुण–काठमाण्डौं । प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग छुटेको केही दिनमा नै फेरि अनेक प्रलोभन देखाएर आफ्नो मठ्ठीमा पारेका पूर्व माओवादी नेताहरुसँग पनि ओली फुट्ने सम्भावना देखिएको छ । उनी बढी जिद्धिशाली र आफ्नो बचनको पक्का नगर्ने भएपछि कोहीसँग पनि नटिकिने एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसारको भूमिका नदिएको र आफूहरुमाथि शंकाको नजरले हेरेको भन्दै उनीनिकट पूर्वमाओवादी नेताहरु परामर्शमा जुटेका छन्।
ओलीले आफूहरुलाई पेलेर जाने मनस्थिति बनाएपछि पूर्वमाओवादी नेताहरुले विकल्प खोज्न थालेको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार ओली समूहका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सहअध्यक्ष बनाउने वचन दिए पनि अहिले तेस्रो बरियता दिनसमेत आनाकानी गरिरहेका छन्। त्यसैगरि गृहमन्त्रीमा जिल्लिएका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई महासचिव विष्णु पौडेलभन्दा माथिल्लो बरियता दिने वचन दिएका ओलीले पछिल्ला दिनमा बेवास्ता गर्न थालेको उनीहरुको आरोप छ ।
ओलीले पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई प्रतिवद्धताअनुसारको जिम्मेवारी र विश्वास नगरेपछि उनीहरु चिढिएका थिए। ‘‘प्रधानमन्त्रीमा उपयोग गर्ने मानसिकता मात्र देखियो’’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा गृहमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘‘उहाँमा आफूतिर तान्नलाई सबै कुरा हुन्छ भन्ने र पक्ष लिएपछि पेल्ने नियत देखिएको छ।’’तर, प्रधानमन्त्री स्रोतले भने गृहमन्त्री थापा र पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरुलाई हैसियतभन्दा बढी जिम्मेवारी दिएको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा काम गरिसकेका एक सदस्यले भने, ‘‘सुरुमा गृहमन्त्रीले मेरो सबै टीम नै मसँग छ भन्नुभएको रहेछ। तर, अहिलेसम्म हेर्दा उहाँ एक्लै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले आफ्ना नेताहरुलाई सरकारको बचाउमा लाग्न आग्रहसमेत नगर्नुलाई कसरी हेर्ने रु यस हिसाबले हेर्दा उहाँलाई दिइएको जिम्मेवारी हैसियतभन्दा माथिल्लो हो।’’गृहमन्त्री थापाले युवा संघमा समानान्तर कमिटी बनाएर एकताविरोधी गतिविधि गरेको उनले आरोप लगाए। ‘‘सरकारमा बस्ने, अनि समानान्तर कमिटी पनि बनाउने रु यस्तो तरिकाले चल्दैन’’ उहाले भन्नु भयो ।
ओलीले फागुन १ गते आफूहरुको इज्जयत जोगाउनका लागि भए पनि जनयुद्ध दिवस मनाउने विश्वासमा रहेका नेताहरु त्यसमा पनि जिल्लिएका छन्। ‘‘जनयुद्ध दिवसमा कुनै न कुनै कार्यक्रम गरौं भनेर हामीले आग्रह गर्यौं। तर, प्रधानमन्त्रीमा त्यसप्रति अरुचि मात्रै होइन, असहमति पनि देखिएको छ’’ खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापानिकट एक नेताले भने।
गृहमन्त्री थापाले केही दिनअघि युवा संघको केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार गर्न आफूपक्षीय नेताहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। उनकै निर्देशनअनुसार युवा संघमा विवाद बल्झिएको छ। युवा संघमा मात्र होइन, थापाले आफूपक्षीय नेताहरुलाई सबै मोर्चामा असहमति राख्न निर्देशन दिइसकेका छन्।